Efeziana 2 - Ny Baiboly
Epistolan'i Md. Paoly Ho An'ny Efeziana
Efeziana toko 2
Ny nahavelomana antsika niaraka tamin'ny Kristy - Ny nanakambanan'ny Kristy ny Jody sy ny jentily ho iray.
1Fahiny dia matin'ny fahadisoana amam-pahotanareo hianareo, 2ka izany no nizoranareo, nanaraka ny satan'izao tontolo izao, sy ny lehiben'izay fahefana eny amin'ny rivotra, dia izay fanahy miasa ankehitriny eo amin'ny zanaky ny tsy finoana. 3Ary tsy misy hivoasana amin'izany koa no toetray rehetra fony izahay nanaraka ny filan'ny nofonay, sy niliba araka ny danin'ny kibo aman-tsaim-pantatray, ka dia zanaky ny fahatezerana toy ny sasany koa izahay, araka ny toetranay tamin'izany. 4Fa Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famindram-po, noho ny halehiben'ny fitiavana izay nitiavany antsika, 5na dia fony mbola matin'ny fahotana aza isika, no nahavelona antsika niaraka tamin'ny Kristy (fahasoavana no namonjena anareo); 6niara-natsangany isika, sy niara-napetrany amin'i Jesoa-Kristy any an-danitra, 7mba hanehoany amin'ny andro ho avy ny haben'ny harem-pahasoavany, amin'ny hatsaram-pony amintsika ao amin'ny Kristy Jesoa. 8Satria fahasoavana no namonjena anareo, ka tsy avy aminareo izany, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, 9tsy avy amin'ny asa, fandrao misy mirehareha. 10Fa asany isika, ary zava-bao nataony tao amin'ny Kristy Jesoa, mba ho amin'ny asa soa voaomany rahateo hataontsika.
11Tsarovinareo jentily araka ny nofo àry, dia hianareo antsoin'ny voaforan-tànana hoe tsy voafora, 12fa tamin'ny andro tany aloha hianareo, dia tsy nanana ny Kristy, voasaraka tamin'ny fikambanan'Israely; olon-ko azy tamin'ny fanekem-pampanantenana, tsy nanana fanantenana, ary tsy nanana an'Andriamanitra teo amin'izao tontolo izao. 13Fa ankehitriny kosa, ao amin'ny Kristy Jesoa, hianareo izay lavitra fahiny, dia tongan'ny ran'ny Kristy akaiky. 14Fa izy no fihavanantsika, izy no nahatonga antsika roa tonta ho iray, izy no nandrava ny efitry ny fisarahana amam-pifandrafesana; 15tao amin'ny nofony no nanafoanany ny Lalàna be didy amam-pitsipika, mba hanakambanany antsika roa tonta ho olom-baovao iray ao amin'ny tenany; 16fa nampihavaniny sy nakambany isika roa tonta, ho tena iray amin'Andriamanitra, noho ny hazo fijaliana izay nandevonany ny fifandrafesana. 17Ary tonga izy, nitory fihavanana tamin'izay lavitra, sy nitory fihavanana taminareo izay akaiky koa, 18satria aminy no ahazoantsika roa tonta manatona ny Ray ao amin'ny Fanahy iray ihany.
19Koa tsy olon-ko azy na vahiny intsony àry hianareo, fa mpiray fanjakana amin'ny olo-masina sy isam-pianakavian'Andriamanitra; 20ny Apostoly sy ny Mpaminany no fanorenana nandrafetana anareo, ary ny Kristy Jesoa indrindra no vato fehizoro. 21Fa ao aminy no isondrotan'ny rafitra rehetra mirindra tsara, mba hiforona ho tempoly masina ao amin'ny Tompo; 22ao aminy no andrafetan'ny Fanahy Masina anareo ho trano onenan'Andriamanitra. >